USARAH PHELPS KWISCANDAL YASEBRITANE KAKHULU KUNYE NEDUCHESS YASEARGYLL - UMDLALO WEQONGA
USarah Phelps kwiNgxelo yaseBhritane kakhulu: 'I-Duchess yayicofa, kodwa bekukho umntu wokwenyani'
Isilumkiso: olu dliwano-ndlebe luqulathe iimbekiselo kumxholo wabantu abadala.
Xa idrama ye-BBC iScandal sesiNgesi kakhulu, ebonisa ibali elingaqhelekanga lalowo wayesakuba yiLungu lePalamente uJeremy Thorpe kunye nesithandwa sakhe uNorman Scott waqala ngo-2018, kwahlangatyezwana nendumiso ephezulu evela kubagxeki kunye nababukeli, ngoncedo lukaRussell T Davies lokubalisa amabali kunye. umboniso omangalisayo kaHugh Grant noBen Whishaw. Ngelo xesha, kwakungekho nto ithi yayiza kubangela i-anthology, kodwa imeko yayo yokubetha yangqineka ingenakuthintelwa kwaye yabangela ukuba umsasazi enze loo nto kanye. I-Scandal yaseBritane kakhulu yagunyaziswa, kunye noDavies esenzela uSarah Phelps, umsebenzi wakhe wamva nje uquka i-Dublin Murders kunye nohlengahlengiso oluninzi lwe-Agatha Christie.
NiniUPhelps udibene nomnye wabavelisi abalawulayo ukuze baxoxe ukuba ngubani umxholo wokulandelelana okungadityaniswanga, igamaUCynthia Payne wayedada emanzini. UMam Cyn, njengoko wayesaziwa, wabalekaumzi woonongogo eStreatham, kumazantsi eLondon, owavalwa ngeminyaka yee-1980.Kodwa uPhelps wayenomnye umntu engqondweni: uMargaret, iDuchess yaseArgyll.
Khange ndiyicinge nokuyicinga, uxelele umabonakude. Ivele yaphuma emlonyeni.
UPhelps waqala ukuva ngoMargaret xa wayesebenza kwintengiso yee-telesales (Ndandingenalo, wavuma).Ngenye intsasa, yena kunye nogxa wakhe babejonga amaphepha, bekhangela umkhondo, xa wabanjwa engazi ukuba: Owu, ufile!
Ngubani ofileyo? Waphendula uPhelps.
IiDuchess ezimdaka, intombazana endala ehlwempuzekileyo. Ufile.
UPhelps wayengekabi nobulumko ngakumbi: Ngubani?! Nguba ni u yena ?!
Owu, yiza uSara! Uyazi! wancwina. Wonke umntu uvile malunga ne-bloojob Duchess.
Ngaphambi komtshato wakhe no-Ian Campbell, uDuke wase-Argyll, uMargaret Sweeny, njengoko wayesaziwa ngoko, wayengowokuqala kwaye ngokuphambili isisityebi saseBritane 'Intombazana' eyayinokufunyanwa kulo lonke uluhlu lweendwendwe kulo lonke itheko, ukuvulwa kwegalari, igala (wena. yinike igama) edolophini. Ngalo lonke ixesha ukuba ngubani wentlalo yaseLondon - okanye naphi na apho wayezifumana khona - wehla, wayelapho uMargaret, kanye ebunzimeni bayo, ehlala engqongwe ngokupheleleyo ngamadoda, awayethontelana kuye njengamanundu edangatyeni. Wayenomoya odlamkileyo owawungenakuthintelwa kwabo bakwindlela yakhe, kuquka no-Ian, nangona iinjongo zakhe zokwenyani zibuzwa kolu ngcelele.
Kwakukho inkalo yokwenyani yeBurton kunye noTaylor kubo, utshilo uPhelps. Babeziinkwenkwezi ezinkulu zehlabathi labo. Wonke umntu wayethetha ngabo. Babengamanyundululu.
Kodwa phantsi kobuhle obuhendayo, uthando lwabo lwalunentliziyo emnyama.
Bobabini babebuhlungu kuye nabani na ababenobudlelwane naye, wongezelela uPhelps. They bobabini babezaphukile kwaye bekhathazeke kakhulu.
UMargaret waye wanyamezela iingxaki ezininzi zeemvakalelo ngexesha lobomi bakhe, kuquka ukuphunyelwa zizisu izihlandlo ezininzi kunye nokuzala umntwana ongasekhoyo, kwaye ubudlelwane bakhe nonina babunobunzima obungapheliyo. Uye wawa kangangeemitha ezingama-40 phantsi kweshafti yokuphakamisa kwaye watshayelwa yi-riptide – ekungekho kuyo eyazisa ubomi bakhe esiphelweni ngesiquphe nesibuhlungu.
I-Duke yachitha iminyaka emihlanu enzima njengebanjwa lemfazwe eJamani kwaye kamva yaqala ukunxanelwa utywala kunye neepilisi zikagqirha, ekwakusithiwa ziphembelele ukungafihlisi kwakhe rhoqo kunye noqhushululu olunobundlobongela. Akukacaci ukuba u-Ian wayemthanda ngokwenene na uMargaret, okanye wayetsalwa ziipokotho ezinzulu zikayise, awayekwazi ukufikelela kuzo ngomfazi wakhe. Umdlalo kaPhelps ubonisa uDuke owayethi xa engazange anikwe imali, wayebhabha abe ngumsindo omhlophe.
Ilaphu lothando lweDuchess kunye noDuke nalo lalingenelwe kukunganyaniseki. UMargaret, ngokukodwa, kuthiwa wayetyekele kubuqhetseba, omnye wemigidi yakhe, eyayibandakanya abantwana baka-Ian nonina, wawuqinisa ngakumbi umsantsa phakathi kwabo. Kwakukho izityholo zokungathembeki kumacala omabini. Kodwa phezu kwayo nje indima yakhe ephambili kwisiphithiphithi sabo, igama lika-Ian alizange lichaphazeleke. Okufanayo, nangona kunjalo, akunakuthethwa kuMargaret.
Ufike wachazwa ngumtshato wakhe kuDuke, nto leyo eyaba yintlekele engapheliyo kwaye yakhokelela kuqhawulo mtshato olukhohlakeleyo olwadlala esidlangalaleni. Ikwashiye uMargaret ethwele isali kunye nezi monikers zikhankanywe ngasentla emva kweefoto awayezibiwe ngu-Ian zisetyenziselwe ukuqinisa ityala lakhe enkundleni.
Nasekufeni, akakwazi kuzisusa. U-Ian, ngokungathandabuzekiyo, akazange awafumane amagama anjalo.
Ngokungafaniyo nengxoxo eninzi ejikeleze uMargaret no-Ian, uPhelps wakha wathabatheka kuphela ngowokuqala.
Yonke incoko yayimalunga nokuba ingubani le ndoda, watsho. Kwaye ndacinga, andinandaba naye. Ungubani [uMargaret] emva kweli hlazo likhulu? Ngobani o wena ?
Ngomnye wezo ntlobo zabalinganiswa, kwaye ubabeke emva kwendlebe yakho kwaye ulinde.
Isithsaba sikaClaire Foy kunye noWandaVision kaPaul Bettany babeyilwe ukuba badlale iiDuchess kunye noDuke, kodwa uPhelps akazange abhale isikhokelo sakhe kunye nabo - okanye nabani na - engqondweni, indlela angazange aphambuke kuyo.
Ukuba ndicinga ngomdlali, andicingi ngomlingiswa, wachaza. Tabalinganiswa endibabhalayo abazi ukuba bajongwa ngabavelisi abaphezulu. Kwaye abazi ukuba baza kudlalwa ngumdlali-ngoko kufuneka ndicinge ngabo.
UFoy noBettany bahle kakhulu, kwaye isibini sibonisa owona msebenzi wabo ubalaseleyo ukuza kuthi ga ngoku. Abaphelelanga ekubambeni into ebhalwe nguPhelps kwiphepha, baye banikezela ngeenkcukacha zabo ezifihlakeleyo, ebengenakukwazi ukuziphendulela, kodwa ezongezelelekileyo imveliso.
Xa u-Paul encuma, umlebe wakhe ongaphezulu uhlehla emazinyweni akhe ngendlela ebaluleke kakhulu ukuba akunakwenzeka ukubhala, watsho. Ukuba ndibhale isalathiso seqonga esithi: 'Umlomo wakhe ophezulu ukhupha umva emazinyweni akhe ngendlela ethile kwaye uyakhunjuzwa ukuba uyi-apex predator', abantu baya kuhamba, 'uSarah, ulahlekelwe ingqondo yakho yokumkani ?’ Kodwa umdlali weqonga uzisa loo nto.
Kukho umzuzwana apho ancuma khona noClaire kuloliwe. Ungumtsalane omsulwa. Kwaye kukho into malunga nendlela ancuma ngayo, ethi ngaxeshanye 'Ewe, ubuya kwenza' kwaye 'Hayi, akufuneki'. Bubunzulu bale midlalo onokuthi ube nethemba layo ekubhaleni kwakho.
I-BBC / iMifanekiso yeMifanekiso
Olu ngcelele lwamacandelo amathathu luvula ngenkqubo yoqhawulo-mtshato yesi sibini-isahluko sokugqibela kwibali labo elidityanisiweyo-kunye noMargaret ukuba athathe inyathelo lokubuza imibuzo. Ibali ke litsibela umva kumzuzu isibini sadibana okokuqala, xa inkohlakalo kunye nenkohliso eza ukuchaza ubudlelwane babo yayingekayithathi ekubambeni kwayo i-vice-like.
I-chemistry yabo bobabini kunye yadala umhlaba otshisiweyo, utshilo uPhelps. Kufana naxa ucinga malunga nokusebenza kwaye ucinga ngekhemistri phakathi kwabadlali abathile ababini, yiloo nto ofuna ukuyidala, ukuba ukholelwa ngokupheleleyo ukuba aba bantu babini ngokwahlukeneyo bayingozi ngokwaneleyo. Kodwa kunye, bayi-f ** ukumkani ibhombu. Kwaye wonke umntu kufuneka abuyele emva. Iza kuba buburhalarhume, izakuba mbi kwaye eneneni, ukusukela kumzuzu wokuqala bedibana, inokuphela indlela enye, eyintshabalalo eqinisekisiweyo.
Akukho mntu uphumelela. Akukho ophumeleleyo ophumayo.
Kodwa ukuba besinokuthelekisa amanqanaba abo emva kwesigwebo sokugqibela, ngokungathandabuzekiyo yayinguMargaret owaba mbi ngakumbi, kuba wayengumfazi, kwaye akazange ayonwabele nje imigidi yakhe kunye namadoda amthandayo, watsho nokuba yayiyitalente ethile yothando. eyakhe – ndiyasithanda isondo kwaye ndinjalo ngokugqithisileyo ulungile kuyo, utshilo kumdlalo weqonga. Kwaye ngenene ilula ngolo hlobo.
Incoko yethu yajika yaya kwezinyeabafazi abantsonkothileyo emehlweni kawonke-wonke abaye babanjwa bejonge kodwa abazange basinde.
Ungazikhumbula ezo foto zika- [Amy Winehouse] zijikeleza uCamden kwibhulukhwe yamadoda ebambe ibhotile enkulu ye-Amaretto, abantu bekhomba kwaye behleka endaweni yokuthi, 'Oogqirha kufuneka babizwe kwaye kufuneka siyifumane le ntombazana. indawo ekhuselekileyo', wakhumbula uPhelps.
UPaula Yates waphathwa kakubi. UDiana waphathwa kakubi. Sonke sikhumbula inkangeleko yamehlo kaBritney njengoko wayejika ejongana nepaparazzi ngaphambi kokuba achebe intloko yakhe.Asifundanga. Kwabakho esi sikhalo sikhulu xa uDiana waswelekayo kuloo tonela. Akukho f ** ukumkani wafunda nto. Akukho mntu wafunda nto.
Ngexesha le-Q&A yephephandaba, uPhelps watyhila ukuba wayecinga kakhulu ngoMeghan Markle kunye ne-vitriol awayephantsi kwayo ngamajelo eendaba kunye noluntu xa wayebhala olu chungechunge.
Ndiyifumana inqabile, wongeze watsho.
Ngelixa i-Scandal yaseBhritane Kakhulu yenzelwe ukonwabisa, nto leyo eyenzayo ngokuqinisekileyo, iyabonakala nakubini ukubukela idrama kunye nokumamela uthando awayethetha ngalo uPhelps ngoMargaret ukuba lo ngumabonwakude onenjongo enkulu.
Ndicinga ukuba into endifuna ukuyenza kukuba abantu bathathele ingqalelo umntu osemva kwesihloko, umntu osemva kocofa, kuba uMargaret wayecofa i-cockbait kwiminyaka engaphambi kokucofa.Wayeyi-clickbait, kodwa kwakukho umntu wokwenene.
Yintoni injongo yokunciphisa umntu ngokugculelwa nokuthotywa? Kuthetha ukuthini ukwenza loo nto emntwini?Ukucofa, izihloko, zingumtyanga wokubetha umntu.
Idrama ayimzobi uMargaret njengomntu omsulwa, kwaye bobabini uPhelps noFoy bathethe ixesha elide malunga neempazamo ezininzi awazenzayo, kodwa bakwagxininise ukuba indlela aziphethe ngayo ayizalwanga ngaphandle kwe-vacuum.
Ndiluthandile olu dliwano ndlebe RT? Funda ezi:
UJessica Plummer kwi Intombazana Ngaphambili: 'Ndandiqhula xa ndandishiya i-EastEnders ndandifuna ukwenza into ekhaphukhaphu'
Freya Allan iyathetha iThe Witcher: 'Ndiziphethe kakubi kakhulu kwisizini yokuqala'
Ndixelele kangangoko ndinako zonke iinkalo ezibalulekileyo zobomi bakhe endicinga ukuba ziyinxalenye yakhe - kwakutheni ukuze abe kobu budlelwane kwaye kutheni engakwazi ukurhoxa, kwaye kutheni esenza izinto azenzileyo, utshilo uPhelps. Ezi zinto azenzeki nje. Kuhlala kukho imeko esondeleyo yenkcubeko kunye neyomntu, indawo yeemvakalelo apho abantu benza izigqibo abazenzayo. Kumalunga nokuzama ukubona umntu ephela.
Kukwacaca kabuhlungu ukuba isibetho sesando uMargaret awasifumana kwinkundla yomthetho kwaye uluvo loluntu lwalungakhathali nokuba kuthetha ukuthini ukuba ngumntu olungileyo, kodwa ngokuhlazisa esidlangalaleni ibhinqa elalile ukuhamba ngokuzolileyo.
Ukuba ubumbiza ngokuba ngumfanekiso wobufazi ebusweni bakhe, uyakukhupha ngaphandle kwendlu yakhe, utshilo uPhelps.Wakujula isihlangu entloko. KodwaNdicinga ukuba ungumfanekiso. Ndimncoma kakhulu.
I-Scandal yaseBritane kakhulu iyafumaneka ukuba uyibukele ngoku kwi-BBC iPlayer. Olu ngcelele lukwasasazwa ngobusuku obulandelelanayo kwi-BBC One. Fumanisa ukuba kuqhubeka ntoni ngobu busuku ngesiKhokelo sethu seTV. Ndwendwela indawo yethu yeDrama ukuze ufumane zonke iindaba zamva nje.
Ndwendwela i-Big RT yethu iphepha lodliwano-ndlebe ukuze ufumane iincoko ezingakumbi neenkwenkwezi ezinkulu kumabonwakude nakwifilimu .
iibhiliyoni zesizini 6 isiqendu 1
uluhlu lwe-dino lwe-jurassic yehlabathi
lithetha ukuthini inani lengelosi elingu-555
iMrs maisel isizini 2 emangalisayo
into yokunxiba kwintombazana yekonsathi